Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / simia ara-batana / inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny evaporation sy ny kristaly dia ny evaporation dia ny fananganana etona avy amin'ny ranona, fa ny crystallization kosa dia ny famoronana kristaly mivaingana avy amin'ny ranoka.
Ny etona sy ny kristaly dia dingana ara-batana mifanohitra. Ny evaporation dia fizotran'ny fanovana ny ranona ho any amin'ny entona ao aminy amin'ny mari-pana ambony iray. Ny kristaly dia ny fizika ara-batana amin'ny fananganana kristaly. Mety hitranga amin'ny fizotran'ny natiora na amin'ny fomba artifisialy.
2. Inona no atao hoe Evaporation
3. Inona no atao hoe kristaly
4. Evaporation vs Crystallization amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Fanafoanana vs Crystallization
Inona ny atao hoe evaporation?
Ny evaporation dia fizotran'ny fanovana ny ranona ho any amin'ny entona ao aminy amin'ny mari-pana ambony iray. Matetika izy io dia ambanin'ny teboka mangotraka ny ranoka. Ny molekiola ao anaty tsiranoka dia samy manana ny lanjany ho an'ny angovo kinetika . Rehefa manome angovo avy any ivelany ka hatramin'ny ranon-javatra (toy ny hafanana) isika, dia mihombo ny angovo kinetika an'ireny molekiola ireny. Rehefa ampy ny angovo ahafahan'ny molekiola ambonin'izy ireo mandresy ny hery intermolecular eo anelanelany, dia mandositra ny etona ny molekiola ary mivadika ho todika entona.
Sary 01: Fanafoanana
Na izany aza, ny sasany amin'ireo molekiola miditra amin'ny dingana entona amin'ny alàlan'ny etona dia afaka mametaka ilay ranoka amin'ny alàlan'ny famoahana . Izany dia mandanjalanja eo amin'ny tahan'ny etona sy ny tahan'ny fampihenana. Ankoatr'izay, ny tsindry etona tsy miova dia apetraka amin'ity dingana ity. Raha mampiakatra ny maripanan'ny ranon-javatra isika amin'io fotoana io, dia mitarika fiakarana amin'ny tahan'ny etona satria nitombo ny angovo kinetika an'ny molekiola. Noho izany, ny habetsaky ny molekiola mibodo ny habaka ambonin'ny ranoka mitombo.
Inona ny atao hoe kristaly?
Ny kristalyana dia dingana ara-batana amin'ny famoronana kristaly. Mety hitranga amin'ny fizotran'ny natiora na amin'ny fomba artifisialy. Ao anatin'ny dingana matanjaka amin'ny zavatra iray, ny molekiola na ny atôma dia voarindra tsara ho lasa rafitra kristaly. Antsoinay hoe rafitra kristaly izany. Ny kristaly dia afaka miforona amin'ny fomba samihafa, toy ny rotsakorana avy amin'ny vahaolana, ny hatsiaka, ny fametrahana azy mivantana avy amin'ny lasantsy (mahalana), sns. Ny hafanan'ny kristaly na ny entralpy ny kristalyana dia ny angovo miova mandritra ny famaritana ny akora iray.
Sary 02: Fanamafisana ny sodium acetate
Misy dingana roa lehibe amin'ny fametahana kristaly: ny fitrandrahana (ny fatran'ny kristaly dia miseho amin'ny ranon-javatra supercooled na ny solvent supersaturated) ary ny fitomboan'ny kristaly na ny fitomboan'ny sombintsombiny (ny fitomboan'ny haben'ny sombintsombiny ary mitarika any amin'ny fanjakana kristaly).
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly?
Ny etona sy ny kristaly dia dingana ara-batana mifanohitra. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly dia ny evaporation dia ny fananganana etona avy amin'ny ranona iray, fa ny crystallization kosa dia ny famoronana kristaly mivaingana avy amin'ny ranoka. Ankoatr'izay, ny etona dia mety manala akora miovaova kokoa amin'ny fifangaroana ranoka, fa ny kristaly kosa dia afaka manala mivaingana avy amin'ny ranoka.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Fanafoanana vs fanaovana kristaly
Ny etona sy ny kristaly dia dingana ara-batana mifanohitra. Ny evaporation dia fanovana ranon-javatra ho any amin'ny lasantsy amin'ny mari-pana ambony. Ny kristaly dia ny fananganana kristaly ary mety hitranga na fizotry ny natiora na amin'ny fomba artifisialy. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny evaporation sy ny kristaly dia ny evaporation dia ny fananganana etona avy amin'ny ranona, fa ny crystallization kosa dia ny famoronana kristaly mivaingana avy amin'ny ranoka.
1. “ etona ”. Fikambanana jeografia nasionaly , 8 aogositra 2019.
1. " Kaopy misy rano " (CC BY-SA 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. “ Kristalizacija ” Nosoratan'i Taki Jo - Asa manokana (CC BY-SA 4.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny firaiketam-po sy ny firaisana Fahasamihafana eo amin'ny famindrana avo roa heny sy ny fihetsiky ny lozam-pifamoivoizana Fahasamihafana eo amin'ny angovo sy ny exergy Fahasamihafana eo amin'ny lalàna voalohany sy ny tsy fetezan'i Newton Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanosehana sy ny fanerena
Fahasamihafana eo amin'ny fisamborana Sinus sy ny sinus sinus
Fahasamihafana eo amin'ny manamafy sy manamafy
Fahasamihafana eo amin'ny fanararaotana sy ny fanararaotana
Fahasamihafana eo amin'ny MSc sy ny diplaoman'ny diplaoma (PGDip)
Fahasamihafana eo amin'ny Autocratie sy ny Monarchy